Nharembozha Game: Warcraft Arclight Rumble Divides Fans - mutambo poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Marie Volkman | May 6, 2022 | Misoro Yakaisvonaka, nhau, Vhidhiyo mitambo
Mazuva mashoma apfuura, Activision Blizzard yakazivisa nharembozha Warcraft Arclight Rumble. A tabletop inotarisa zano mutambo une chiito zvinhu. Ichaburitswa kune ese Android uye iOS uye inofanirwa kuve nechokwadi inonakidza shongwe yekukanganisa mitambo panharembozha mune ramangwana. Asi izvo zvinonzwika senge mutoro wakamisikidzwa wekunakidzwa kwemitambo zvinoita sekunge zvichikonzera mhirizhonga pakati pevamwe vatambi vepakati kunyangwe isati yaburitswa. Tinoshamisika: Sei Warcraft Arclight Rumble ichiparadzanisa nyika yevateveri?
Musi weChitatu, May 4, nguva yakanga yasvika. Vatambi pasi rese vakamirira kuperezeka pamberi peBlizzard live stream kuitira kuvhurwa kwemutambo mutsva wenharembozha. Kare, paive nefungidziro pasocial media kumativi ese. Vazhinji vateveri veWarcraft vangadai vakatarisira kune homwe-saizi MMORPG. Asi vaoni vakakomborerwa nechimwe chinhu chakasiyana zvachose, chinoti musanganiswa weshongwe yemhosva, makomba uye kupambwa. Akapfeka zvipfeko zveWarcraft. Izvi zvinonzwika sezvinozivikanwa kune vakawanda vatambi. Mitambo yekudzivirira shongwe, inoita seyakafanana neyakagadzirwa naBlizzard yeshongwe yemhosva, iri pakati pemitambo inonyanya kufarirwa muzvitoro zveapp.
Tower mhosva uye kupambwa panzvimbo yeMMORPG
Ngatitarisei izvo Warcraft Arclight Rumble akatipa kusvika parizvino maererano netirailer. Zvakafanana neiyo yakakurumbira Moba League yeNgano, akati wandei anotakurika madiki akamirira vatambi pano. Idzo dzinoyeuchidza nhamba dzepatafura uye ndedzechimwe chemapoka mashanu anozivikanwa eWarcraft, Alliance, Horde, Blackfield, Mhuka dzeMsango kana Undead. Imwe neimwe yemakumi matanhatu neshanu madiki inopa akasiyana akakosha hunyanzvi ayo vatambi vanogona kushandisa mumutambo kutora pasi vanopikisa. Mukuwedzera, iyo miniature inogona kuenzaniswa uye yakagadzirirwa. Rudzi rwechiziviso rwakatoratidza mavara ane mukurumbira seGommash Hellscream uye Archmage Jaina Proudmoore. Nhamba dzinofanirwa kuunganidzwa mutambo uchienderera mberi.
Warcraft Arclight Rumble inoridzwa zvinoenderana nemusimboti wemutambo unoyeuchidza Moba. Mumishandirapamwe, mutambi nemupikisi wake vanotumira melee, akasiyana uye anobhururuka mayunitsi muhondo pamwe chete kuparadza mauto evavengi. Kuti uite izvi, vatambi vese vanoshandisa nzira dzakafanotemerwa dzinogara dzichitungamira munzira yenheyo inopikisa. Zvichakadaro, anopikiswa mapoinzi ekudzora anofanirwa kutorwa. Iwe zvakare unofanirwa kuunganidza zvinhu negoridhe kubva kupfuma zvipfuva nemigodhi. Mukundi wemutambo ndiye anoparadza hwaro hweanopikisa kana kukunda mukuru wavo. Zvese mune zvese, akasiyana emakampeni akasiyana, seye ega kana co-op modhi, PVP kuuraya pamwe nezviitiko nemakomba, zvakamirira kuwanikwa muWarcraft Arclight Rumble.
Inonzwika zvakanaka? Apa ndipo panotsemuka nyika yevatambi
Streamer uye World of Warcraft mutambi Asmongold akataura zvakanaka pamutambo mutsva weBlizzard. Mutambi, anozivikanwa nemavhidhiyo ake eTwitch uye YouTube, anoona Warcraft Arclight Rumble semuchina wekudhinda mari uye sitiroko yehunyanzvi. Saka akati murukova ichangoburwa kuti Mobile mitambo anenge kudhinda mari. Vakataurawo pamusoro pemavhoti asina kunaka. Mutambi anofunga kuti kumutambi wese anoti, “Ah, upenzi uhwu, ndinohuvenga,” panogona kunge paine vamwe vatambi kunze uko vangashandisa madhora zana nemakumi mashanu pamutambo musvondo rekutanga.
“Nekuti nharembozha dzinodhinda mari. Kune mumwe nemumwe wenyu vakomana vakaita sekuti 'Ah, izvi hazvina musoro, ndinovenga izvi,' kune vamwe vanhu vashoma kunze uko vachashandisa $150 muvhiki yekutanga yemutambo.
Aitosvika pakutaura kuti Blizzard's mobile game inogona kufarirwa zvakanyanya uye mutambo wakanaka. Chinhu chinosetsa, anoti, ndechekuti Warcraft Arclight Rumble inogona kuita mari yakawanda kupfuura World of Warcraft. Muchokwadi, ane chokwadi chekuti mutambo uyu uchaunza mari yakawanda kupfuura Diablo 3.
"Ini ndinofunga kuti inogona kufarirwa zvakanyanya uye kuti uyu unogona kunge uri mutambo mukuru. Chinhu chinosetsa ndechekuti mutambo uyu unogona kuita mari yakawanda kupfuura World of Warcraft. Ndine chokwadi chekuti mutambo uyu uchaita mari yakawanda kupfuura Diablo 3."
Pasocial media seYouTube, Twitter neFacebook, maonero evanogona kuve vatambi uye vamwe vagara vakasimbiswa Warcraft mafani anoita seanosiyana zvakanyanya. Semuverengi wezvataurwa, zvinoita sekunge kune makambi maviri chete: vatambi vemazuva ese uye varwi vepakati. Mumwe wevanotsigira uye mumwe weavo vangada zvikuru kubvarura mutambo uyu nemashoko makukutu. Akaodzwa mwoyo mushandisi weFacebook anonyora nemazwi akajeka: "Hapana zvigadziriso zvekugadzirisa kusati kwapera kweWarcraft 3, asi kurasa mari yemutambo wenhare. Kutengesa mweya weBlizzard uye chipfambi chemhando. Maonero angu."
Vatambi venguva dzose vanoda imwe mobile game
Chinhu chinodzokorora zvakare uye zvakare. Asi, vatambi venguva dzose vangadai vakashuvira kudzokorora kana kupedzwa kweWarcraft vhidhiyo yemutambo. Iwe unonzwa uchinyengerwa neBlizzard's itsva Warcraft Arclight Rumble. Vamwe vamwe vatambi vanofananidza mutambo uyu kune mamwe nharembozha yekurwa uye zano mitambo senge nharembozha Clash of Clans naFinnish mutambo wekuvandudza Supercell. Vanotsikirira kutsiva kusingasaruri kwechinyorwa, icho chakavanzika pasi pejasi reWarcraft. Vazhinji vanotaura maWarcraft mafani anobvumirana pachinhu chimwe: Dziviriro yeshongwe uye gamba rekuunganidza mutambo seArclight Rumble haina chainowirirana neWarcraft!
"Mutambo wekuunganidza gamba, imhando yakawandisa, kunyangwe neshongwe yekudzivirira zvinhu [...]. Zviite iwe, playerbase yako uye kambani yako inokoshesa favour, bvisa izvi uye ita chimwe chinhu chiri nani [...]. "
Kanenge kazhinji, zvisinei, mumwe anoverenga asina kwaakarerekera uye akanaka mapositi. Izvi ndizvo zvinotaurwa nevatambi venguva yemberi, vanofunga kuti karavhani uye kunyanya iyo pfupi yemutambo wevhidhiyo kubva kune inoyerera Towellie inotaridzika ine mavara uye akasiyana mafaro. Inosimbiswa zvakare uye zvakare kuti yakasununguka kutamba. Izvo zvingave kukurudzira kune vazhinji kuti vaedze nharembozha Warcraft zvakanyanya mune ramangwana.
"Inotaridzika kunakidza uye yakasununguka, saka ini ndichazviita."
Asi kunyange vatambi venguva dzose vanopindura nenzira inonyevenutsa uye votaura kuti unofanira kutanga waedza mutambo kuti ugadzire maonero akavimbika. Zvimwe zvese hazvina kururama kunetsa.
"Maererano nemotto" Izvo murimi asingazivi, haadyi? Iniwo ndinozviona ndiri core fan. Akakurira paWarcraft 1 uye 2. Muuto ipapo Warcraft 3 yaida uye yekupedzisira hongu WoW. Ini ndakafungidzira chimwe chinhu pasi penharembozha, asi ndinofara kuiridza uye ndiri kuda kuziva kuti zvakamira sei. Kutonga chimwe chinhu usati watamba ibhururu!."
Pakupedzisira, chinobatanidza vatauri vazhinji mufaro, kana kuti kubvuma, kuti Warcraft inoratidzwa mumifananidzo nemapoka. Warcraft Arclight Rumble haizove homwe Warcraft, asi shongwe yemhosva mutambo nemagamba ako aunofarira unogona kunakidza, kunyangwe uri mukuru. Hazvisi pasina chikonzero kuti kune kudiwa kukuru kweiyi genre muzvitoro zveapp. Zvichida mumwe kana mumwe mutambi asina ruzivo anotanga kufarira Warcraft yekutanga uye nekudaro inochengetedza ramangwana rayo pamwe chete nevamwe vese vateveri vepasirese. Mushandisi anonyora kuti: "kuchema kusingaperi uku" Blizzard iri kuita zvisizvo, Blizzard iri kuita zvisizvo" dzikama uye tamba chimwe chinhu. boka gurusa revatambi vachiri vatambiwo zvavo uye nokudaro boka guru rinovavarirwa.”
Mubvunzo wekuti sei Arclight Rumble iri kuparadzanisa nharaunda yevatambi inoita seyakajeka: vamwe vatambi venguva dzose vaitarisira mutambo wevhidhiyo weWarcraft wakajairika kuti uende, asi vamwe vaitarisira MMORPG seWorld of Warcraft. Pamusoro pezvo, chishuwo chekusarudzika chinoratidza zvakare uye zvakare mumashoko, dzimwe nguva pakati pemitsetse, kazhinji yakanyorwa nemavara makuru: Isu Vatambi veWarcraft vachipesana nevazhinji.
Mubvunzo unomuka: mutambo wevhidhiyo uripo chete kuburikidza nefa-hard fan base? Imwe inodaidzira yakaodzwa mwoyo yeWarcraft 4 uye saka inoramba mutambo wenhare. Mutambo unogona kukwezva kune chero mutambi, kunyangwe avo vasati vambotamba mitambo yeBlizzard? Isu tinofunga: funga kunze kwebhokisi kazhinji uye unakirwe.
World of Warcraft: Chronicles Slipcase 1 - 3 IV: Yakaganhurirwa ku444... * 149,00 EUR tenga
Yakapedzisira kugadziridzwa pa19.05.2022/XNUMX/XNUMX / Affiliate Links / Mifananidzo kubva kuAmazon Product Advertising API. * = Affiliate links. Mifananidzo kubva kuAmazon PA API
Kare Blade Runner: Peni nePepa zvinotyora iyo miriyoni mamaki paKickstarter
Inotevera May anogadzira zvese zvitsva: zvigadzirwa zvitsva kubva kuKosmos Verlag
Muedzo weKubata: Carp uye Coarse - kubata hove muhofisi yemba
Jurassic World: Evolution 2 - DLC inounza dinosaurs nyowani
Pax Pamir: Yechipiri Edition inowana kudhindwa - mari kuburikidza neKickstarter
Star Wars X-Wing: Mutambo mudiki mukukwana